Vaovao - Fivarotana fiasan'ny kitapo vaovao momba ny urine
Tamin'ny aprily 25th 2020, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nanangona ny magazay vaovao momba ny kitapo fivalanana. Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2008. Roa ambin'ny folo taona lasa izay, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nanolo-tena ho orinasa iraisam-pirenena, ary ankehitriny dia tena manana atrikasa fanavaozana iraisam-pirenena.
Tao amin'ilay atrikasa vaovao, nividy milina vaovao ihany koa izahay ary napetraka tao anatin'ny famokarana. Manana tsipika fivoriambe mirindra kokoa izahay. Ny mpiasa samy hafa dia samy manana ny fizarazaran'ny asany, ary ny fizarazarana ny mpiasa dia samy manana atrikasa famokarana samihafa, izay mamonjy fotoana betsaka ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana. Ilay atrikasa famokarana vaovao dia manana habaka lehibe kokoa noho ilay atrikasa taloha, ny famokarana kitapo fivalanana dia mety kokoa eto, ary ny mpiasa dia manana fotoana fiasana antonony kokoa. Azo lazaina fa amin'ny atrikasa vaovao, amin'ny lafiny iray, dia misy famokarana mahomby sy mahazo aina kokoa.
Taorian'ny niorenan'ny magazay vaovao fivarotana kitapo dia tonga amin'ny haavony vaovao koa ny sandan'ny vokatra. Raha ampitahaina amin'ny famokarana sakaosy 100000 isam-bolana isam-bolana tamin'ny 2010, dia izao dia afaka mamokatra harona miisa 1000000 isam-bolana, fitomboana 10 heny. Izy io koa dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny Reed mpiara-miasa amintsika. Reed dia nilaza fa: "tena gaga aho fa ny kitapom-bokatra izay alefanao amiko dia haingana kokoa noho ny teo aloha, ary mitazona haavo avo dia avo ny kalitao".
Mpikambana iray ihany koa no namorona ny atrikasanay Li Hua nilaza fa: “Ny fivarotana asa any Urine dia manome ahy tontolo iasana tsaratsara kokoa, reharehako tokoa fa anisan'ny Teknolojian'ny fitsaboana Mediane Huaian.
Ny tanjon'ny orinasan-tsika voalohany, ny mpanjifa aloha, ny serivisy aloha. Ny mpamatsy fampisehoana vidiny tsara indrindra no tanjonay.
Fotoana fandefasana: Apr-25-2020
Suction Catheter, Alikaola, Iv Catheter, Tube fihinanan-jaza, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana, Pads amin'ny alikaola,